Orinasa ovy - mpanamboatra ovy sy mpamatsy ovy any Shina
Ovy mamy koa dia legioma mahazatra indrindra amin'ny fiainana andavan'andro, ny namana sasany toy ny masaka mamy ovy azo sotroina, ny vokatra sy ny fiasan'ny ovy mamy dia tena tsara koa, ny olona sasany tia mihinana ovy nendasina.
Ny nofon'ny ovy volomparasy dia volomparasy hatramin'ny volomparasy mainty. Ho fanampin'ny otrikaina ovy tsotra, dia manan-karena ihany koa izy amin'ny selenium sy anthocyanins. Ny ovy volomparasy dia malaza be eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ary malalaka ny vinan'ny fampandrosoana. Ny vanim-potoana famokarana ovy mamy dia manomboka amin'ny volana septambra, voafetra ny fotoana famatsiana, maharitra volana vitsivitsy monja. Ny vovo-ovy mamy volomparasy iray manontolo dia mandresy ny fameperana vanim-potoana famokarana ovy volomparasy ary manitatra betsaka ny famokarana orinasam-pamokarana ovy mamy volomparasy.